जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरे डेल्टा भेरियन्टको जोखिम - Web Tv Khabar
जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरे डेल्टा भेरियन्टको जोखिम
श्रावण ६, २०७८ बुधवार ०६:४१ बजे
नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोनाविरुद्धको दुबै खोप लगाएका व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिएको छ । इन्डिया काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर)को अध्ययन रिर्पोटअनुसार कोरोना भाइरसविरुद्धको दुबै डोज खोप लगाएका व्यक्तिमा पनि इन्फेक्सन देखिएको छ । त्यसको मुख्य कारण भाइरसको डेल्टा भेरियन्ट हो ।
यसको अर्थ हो, खोपको दुबै डोज लगाएका व्यक्तिलाई पनि संक्रमणको जोखिम छ । संक्रमणको जोखिम तत्काल हटेको छैन । यो अध्ययन महत्वपूर्ण छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर केही नियन्त्रणमा आएसँगै भारतमा चहलपहल बढेको छ । हजारौंको संख्यामा मानिसहरु सडकमा देख्न सकिन्छ । त्यो भिडमा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएका धेरै दृष्य देखिन्छ ।
मास्क झुण्ड्याएका त हुन्छन तर, लगाउने तरिक सहि हुँदैन् । त्यसमाथि सामाजिक दुरी पनि पालना भएको छैन् । भारत सरकारले अहिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भए पनि जोखिम कायम नै रहेको उल्लेख गर्दै सावधानी नअपनाए फेरि संक्रमण फैलने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
आइसीएमआरको अध्ययनअनुसार भाइरसविरुद्धको खोपले व्यक्तिको ज्यान बचाउन सक्छ, तर संक्रमण नै हुन नदिन सक्दैन । आइसीएमआरले १७ राज्य, केन्द्र, प्रदेशबाट ६७७ क्लिनिकल नमुना जुटाएर अध्ययन गरेको थियो ।
यी स्याम्पलहरु कोरोनाविरुद्धको दुबै डोज खोप लगाएर पनि संक्रमण भएका व्यक्तिहरुको थियो । ६७७ मध्ये ८६ प्रतिशत नमुनामा डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएको थियो । जसमध्ये ८५ जना भाइरसविरुद्धको पहिलो डोज लगाएपछि संक्रमित भएका थिए । त्यसैगरि ५९२ जना दोस्रो डोज लगाइसकेपछि संक्रमित भएका थिए ।
यी मध्ये ९.८ प्रतिशतले अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो भने ३ जनाको निधन भएको थियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने कोरोनाविरुद्धको एक वा दुबै डोज लगाए पनि संक्रमणको जोखिम भने कायम नै रहन्छ । यसले गर्दा आफ्नो वरिपरि रहेका व्यक्ति र बालबालिकालाई संक्रमण हुने जोखिम बढेको छ । बालबालिकामा खोप लगाउन सुरु गरिएको छैन, त्यसैले हामीले सावधानी अपनाउन आवश्यक छ ।
खोपले डेल्टा भेरियन्टलाई असर गर्दैन ?
कोरोना भाइरसविरुद्दको खोपले गम्भिर अवस्था हुनबाट जोगाउनुका साथै र ज्यानै जानसक्ने जोखिमलाई कम गर्छ ।
आइसीएमआरको अध्ययनअनुसार डेल्टा, अल्फा–बिटा, कप्पा भेरियन्टमा खोप प्रभावकारी छ ।
खोप लगाएपछि के गर्ने, के नगर्ने ?
खोप लगाएपछि पनि अत्यावश्यक नभइ घरबाहिर निस्कन हुँदैन । मास्क लगाउन छोड्न हुँदैन । जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डलाई कडाइकासाथ पालना गर्नुपर्छ ।
अमेरिकाको सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनका अनुसार कोरोनाविरुद्धको दुबै डोज लगाएका व्यक्तिले विना मास्क दैनिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने डेल्टा भेरियन्ट विश्वमा तीव्र रुपमा फैलिरहेकोले मास्क अनिवार्य लगाउन सुझाएको छ । यससँगै १९ जुलाईमा लकडाउन खुकुलो गरिएको बेलायतमा दुबै डोज लगाएका व्यक्तिलाई मास्क अनिवार्य लगाउन निर्देशन दिइएको छ ।
भारतले कोरोना भेरियन्टतिर निगरानी बढाएको छ । ९ जुलाईसम्म भारतमा सक्रिय संक्रमितमा करिब ८८ प्रतिशतमा डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएको थियो । यस अर्थमा भारतमा दैनिक संक्रमित भइरहेका १० मध्ये ९ जनामा डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भइरहेको छ ।
खोप लगाएका व्यक्तिले कस्ता गतिविधिमा भाग लिन सक्छन् ?
खोपको दुबै डोज लगाएका व्यक्तिलाई संक्रमण भएपनि गम्भिर अवस्था हुँदैन । पहिलो खोपले केहि हदसम्म सुरक्षा प्रदान गर्छ ।दोस्रो डोजले व्यक्तिको रोग प्रतिरोध क्षमतालाई धेरै बलियो बनाउँछ ।
खोप लगाएका व्यक्तिबीच भेटघाट गर्न मिल्छ । शारीरिक व्यायामको लागि खुल्ला चौरमा जान सकिन्छ । खुल्ला ठाँउमा सञ्चालन भएका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ । यात्राको समयमा सम्भव भएसम्म डबल मास्क लगाउनु पर्छ ।
तेस्रो लहरबाट बच्न के गर्ने ?
कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने आशंका गरिएको छ । त्यसबाट बच्न सबैलाई खोप लगाउनु उचित विकल्प हो । साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइकासाथ पालना गर्नुपर्छ ।
गम्भिर प्रकारको अन्य रोग लागेको व्यक्तिमा रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुने भएकाले सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ । उनीहरुलाई खोप लगाएपनि सामान्य व्यक्तिको भन्दा बढी जोखिम हुनसक्छ । एजेन्सीकाे सहयाेगमा
# डेल्टा भेरियन्ट